LESPEDETSA: GURYAHA DAAWOOYINKA IYO CONTRAINDICATIONS, SHARAXAADDA IYO ISTICMAALKA DHIRTA DAAWADA. DAANJOOGE, XANNAANEYN, DABOOLID: SII KORDHAYA ABUUR - SOOSAARKA DALAGGA
Dabeecadda ayaa na siisay dhirta daawada ee kala duwan - qaar ka mid ah ayaa loo yaqaanaa qof walba, wax yar ka yaqaanno dadka kale. Mid ka mid ah caleemaha yar yar ee la yaqaan ee loo yaqaan 'Lespedeza'. Laga soo bilaabo warshad ka dhigo tinctures, decoctions, dhoobo dhoobo. Dhammaan guryaha dawooyinka ah, ka hortaga iyo sida loo koro lespedetsu naftiisa, aqri maqaalkeena.
Xilligan dilka ah wuxuu leeyahay xididada gaaban iyo jirid toos ah oo gaari kara 1,5 m dherer ahaan. Waa cufan la daboolay caleemo cagaaran oo cagaaran. Inflorescences waxay sameeyaan burush; ubaxa waa wax yar oo isku mid ah qaabka ay aboorada, mid kasta oo leh shan faashad leh xadhkaha casaan on asalka cad ama jaalaha ah. Warshadu waxay bilaabmaysaa inay midho u dhaliso xilliga dayrta. Digirta waa dhadhan leh gloss, oval-qaabeeya.
Lespedets waxay leedahay qaybo badan oo muhiim u ah bini-aadanka - kalluunka, karotylic acids fenol, flavonoids kala duwan iyo mareellooyin.
Baro wax badan oo ku saabsan daawooyinka noocan oo kale ah sida: kafarooska, yarutka, socodka, qulqulaha, qulqulaha qadhaadh, cautaury, astragalus, bonfire, bedworm, sedge, buug, pike, yasnotka iyo zubrovka.
Waa muhiim! Heerka suntan ee dilka ah kanani waa mid aad u yar, taas oo u dhiganta bini-aadanka oo aan u hanjabin jidhka xanaaq.
Warshadu waxay leedahay saameyn wanaagsan oo bogsiin leh, maadaama ay leedahay guryaha soo socda:
cadaadiska ka hortagga
Sidoo kale, thanks to lespedec, dheelitirka biyaha-cusbo waa la nidaamiyaa.
Warshad waxaa loo isticmaalaa ka hortagga iyo daaweynta xanuunka soo socda:
cudurada kalyaha - urolithiasis, glomerulonephritis, pyelonephritis;
dhibaatooyinka nidaamka dareenka - niyadjab, niyadjab, walaac, walaac;
waraabowga maqaarka iyo irbadaha, iyo sidoo kale xanuunada kale ee ENT;
Dhibaatooyinka dermatoloji - lichen, dermatitis, urticaria;
cudurada kaadi-yaryar - cystitis, urethritis;
preeclampsia, cayilka, xanuunka dheef-shiid kiimikaad hooseeya;
cudurada qanjidhada ee marxaladaha hore.
Marka cudurka kansarku ku dhaco, koob qaado iyo kalluunka.
Dhibaatooyinka ay keento daawooyinka ku salaysan dhirtaasi waxay u muuqdaan kuwo maya. Waxa kaliya ee dhici kara waa muujin xasaasiyadeed. Hase yeeshee, waa wax aan muhiim ahayn waxaana si fudud looga saaraa caawinta antihistamines.
Waxaa la rumeysan yahay in Lespedec aysan laheyn wax ka horjeeda - marka laga reebo dabcan, shakhsiyad xumo shakhsiyeed, taas oo dhif ah. Sidaa darteed, waxaa la siin karaa carruurta yaryar, iyo haweenka uurka leh ama nuujinaya. Inkastoo ilaha qaarkood aysan wali kugula talineynin bixinta daawooyinka ka soo jeeda jadeecada ilaa qaybaha dadka. Si aad u noqotid 100% hubaal, waxaa fiican inaad kala tashato takhtarkaaga kahor.
Waa muhiim! Carruurta, iyo sidoo kale bukaannada qaba beerka curyaanka ah, ayaa la siinayaa tincture khamriga, laakiin biyaha dhasha.
Waraabinta Qamriga Daroogada
Hadda waxaan kuu sheegi doonaa sida loo diyaariyo quwad siman oo faa'iido leh oo laga helo geedkan faa'iido leh.
Cabitaankani wuxuu daweeyaa cudurka kelyaha, iyo sidoo kale inuu sameeyo ka hortagiddooda. Waxaad u baahan doontaa:
Lespedeta - 1 tbsp. l.
Karkari geedka 15 daqiiqo. Dabool oo u daa ilaa 2 saacadood. Cadaadiska. Qaado decoction 200 g (100 g waa ku filan carruurta iyo haweenka uurka leh) saddex jeer maalintii maalin nus ah cuntada ka hor. Decoction sidoo kale loo isticmaalaa for compresses iyo kiriimyada - gelin sharooto nadiif ah galay iyo ku rid boogta ama baro xanuun muddo 30 daqiiqo ah. Waxaa intaa dheer, waxaa lagu daaweeyaa sanka oo duuf iyo cagaarshow - waxaa lagu aasay foomka diiran ee sanka ama dhegaha. Iyo sidoo kale xinjirta difaaca, waxay sidoo kale indhahooda ku xoqeen.
Marka urolithiasis iyo dhagxaan kelyaha, hargabka iyo cudurrada fangasku isticmaalaan faleebada biyaha. Waxaad u baahan doontaa:
Lespedeta - 2 tbsp. l.
karkaraya - 1 l.
Buuxi alaabta ceeriin biyo karkaraya, karkariyo kuleyl dhexdhexaad ah 10-15 daqiiqo. Ku adkee meel diiran saacad. Cadaadiska. Wixii urolithiasis iyo dhagxaan kellida, cab cabitaan nus saddex jeer maalintii. Marka urolithiasis, hargab, fungal - hal galaas, sidoo kale, saddex jeer maalintii.
Cab shaah si aad u kiciso una kordhiso waxqabadka nidaamka difaaca jirka. Waxaad u baahan doontaa:
Lespedeta - 1 tsp;
biyaha - 25 ml.
Karkari waxyaabaha alaabta ceeriin leh kuleylka hooseeya illaa 15 daqiiqo. Falanqe. Isticmaal shaaha caadiga ah dhowr jeer maalintii.
Wixii maraakiibta iyo isgoysyada, waxaa wanaagsan in la qaato tincture. Waxaad u baahan doontaa:
la qalajiyey lespedeza;
Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa lagu qaadaa qadar aan rasmi aheyn, waxa ugu muhiimsan waa in la ilaaliyo saamiga! Ku burburin alaabta ceeriin ee caanaha, oo ku qoyso vodka (1:10). Ku shub weel dhalada ah oo si adag u xir, u dhig laba asbuuc meel gudcur qabow leh. Ha iloobin inaad ruxato waqti ka waqti. Ka dibna ku shub weel weel nadiif ah. Isticmaal saddex jeer maalintii saacad badh ka hor cuntada, adoo sifeeya 30 dhibcood oo ah 100 ml oo biyo ah. Herpes waxaa sidoo kale lagu daaweeyaa tinctures. Waxaad u baahan doontaa:
la qalajiyey lespedeza - 100 g;
Buuxi warshadda leh vodka. U daadi weel dhalada ah meel qabow mug leh 10 maalmood. Falanqe. Cab 1 qaado oo qasi ah 50 ml oo biyo diirran ah, laba jeer maalintii kahor cuntada. Koorsadu inta badan waxay socotaa ilaa soo kabashada ugu dambaysa.
Ma taqaanaa? Botanistaha Faransiis Andre Michaux ayaa ugu yeeray warshadahan Cespedez - oo sharaf u ah guddoomiyaha Spanish Vincent Manuel de Cespedes y Velasco, oo ka caawiyay inuu cilmibaaris ku sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, marka daabacaan qoraalka shaqada cilmi-baarista qalad ayaa dhacay - dhirta ayaa si khalad ah loogu qoondeeyey sida Lespedez. Sidaa darteed dakhliga soo gala magaca cusub.
Si si guul leh loogu beero iyo u koro warshad, iyo sidoo kale inaad soo ururiso oo aad soo iibsato alaabta ceeriin, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerar gaar ah.
Horumariyaan guriga St. John's Wort, Savory iyo oregano.
Lespedeza waa mid aan qabyo ahayn, markaa si fiican ayay u habboon tahay xaalado kala duwan. Waxay horumarisaa dhibaato la'aan iyo hooska iftiinka ah (laakiin kaliya hal nal ah, geedka ayaa wali u baahan yahay iftiin) iyo aag furan. Lespedeza ayaa si fiican ugu kora dalal dabacsan, oo si fiican u dillaacsan oo leh qoyaan dhexdhexaad ah. Heerkulka ugu haboon ee loogu talagalay waa midka u dhigma aagga dhexdhexaad ah. Laakiin xitaa lespedean muddada heerkulkiisu hooseeyo waxay ku xanuunsan karaan qabowga. Run, bilowgii guga qayb ka mid ah qaybta ah ee dilka ah ayaa si dhaqso ah loo soo celiyo.
Dakhliga asaasiga ah wuxuu u baahan yahay quudinta. Bacriminta ay ku jiraan nitrogen ama fosfooraska ayaa sameyn doona; Guga, bacriminta organic waxaa intaa dheer lagu dabaqay. Dharka noocan oo kale ah ayaa lagu dari karaa biyaha, taas oo waraabiyo dhirta.
suckers xidid adag;
Habka ugu dambeeya waxaa loo isticmaalaa si aan caadi aheyn sababtoo ah waxtarka hooseeya. Habka ugu fiican wuxuu isticmaalayaa abuurka baaluqa. Waxay si fiican u soo baxaan, xitaa haddii aan la daaweynin daaweyn gaar ah. Saddexda sano ee hore, dhirta waxaa lagu koray sariir ku meel gaar ah. Sannadka afaraad waxaa lagu beddelaa meel joogto ah. Transplanting a warshad qani ah oo baaluqan waa mid ka mid ah dhimashadiisa. Bannaanka baaluqa badanaa waxaa ku jira kobcinta xididka. Waxaa la gooyaa gooyn iyo rujin. By habka, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo gooyn xoog leh leh "Fiton" xalka - tani waxay kordhisaa waxtarka. Lespedetsu waxaa lagu beeray caawimo geedo. Dooro goobta ugu haboon ee beerto, ma ilaawin in dhirta jecel yahay ciidda la miiray, oo si fudud uma dulqaadanayso qoyaan joogta ah. Diyaarso isku dar ah ciidda beerta wanaagsan oo ciidda la qalajiyey. Ku dar bacrimin halkaas (isku dar ah potassium, fosfooraska, nitrogen). Libaax ku shub. Samee dhagaxyada duurjoogta carrada ama quraaradaha; Waxaad u isticmaali kartaa dhulkan qalalan oo laga helo goob kale.
Sidoo kale ogow sababta mulkiilaha loo baahan yahay.
Sanadaha ugu horreeya ee nolosha, lespedeza waxay u baahan tahay waraabin joogto ah - illaa 10 litir oo biyo ah halkii geed. Way fiicantahay inaad qaadato roob ama biyo dejis ah, heerkulkuna wuxuu ka diiraa hawada. Dhirta waayeelka waa in la siiyaa qoyaan kaliya xilliga qallalan. Waxaa loo dulqaadanayaa hoos u dhac ku meel gaar ah oo qoyaan la'aan ah. Laakiin tani waa in si tartiib tartiib loo sameeyo.
Diyaargarowga daawada qaadashada burooyinkeeda ubax, caleemaha, jirridaha. Waxaa lagama maarmaan ah in la soo ururiyo alaabta ceeriin inta lagu jiro mudada geedka, jarida qaybta caleenta ee baadiyaha at height of 10-15 cm dhulka. Alaabta ceeriin qallalan adoo isticmaalaya qalajiyaha ama hoostiisa hoostiisa, ku faafidda lakab khafiif ah warqad. Waa suurtagal in la soo saaro qalajinta qorraxda tooska ah. Haddii lagu sameeyo gudaha gudaha, dhammaantiis micnaheedu waa inuu daryeelo helitaanka hawo wanaagsan. Ku kaydi lespedetsu bacaha wax lagu duubo ama weelasha dhalada ah ee xiran, meelo hawo leh oo qalalan. Hayso alaabta ceeriin ah waxaa lagula talinayaa in aan ka badnayn shan sano.
Ma taqaanaa? Lespedetsa xitaa waxay leedahay saameyn faa'iido leh ... dhulka. Waxay u fadhiistay dhulka iyo joojiyaa horumarinta nabaad-guurka. Oo xididdadiisuna waxay la fal-galaan bakteeriyada soo ururisa nitrogen, si ay u noqoto mid quudiya dhirta.
Sidaa darteed, Lespedez xaqiiqdii waxay u qalantaa dareenkaaga. Haddii aad la tashatid dhakhtarkaaga oo wax walba u qaban doono sida ku xusan talooyinka, waxaad hubaal noqon doontaa inaad ka faa'iidaysato jirkaaga. Oo adoo isticmaalaya talooyinkayaga ku saabsan daryeelka cimilo-dilka, waxaad hubaal ka dhigan kartaa geedka this qurux badan iyo caafimaad leh ee beertaada.